Mogadishu Journal » Xan ayaa leh: Chelsea ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro ciyaaryahanka Real Madrid ee Varane, Bayern ayaa dooneysa Nagelsmann
Horyaalka Premier League ma wuxuu u daneynayaa Raphael Varane?
Varane ayaa u ciyaaray Real Madrid, isagoo kula guuleystay LaLiga iyo Champions League.
Laakiin Varane ayaa lagu huri karaa caasimada Spain, iyadoo Chelsea lagu soo waramayo inay xiiseyneyso.
Sheekada ugu sarreysa - Horudhacayaasha CHELSEA EE VARANE
Chelsea ayaa ka horeysa kooxaha Manchester United iyo Paris Saint-Germain tartanka loogu jiro saxiixa daafaca Real Madrid Raphael Varane, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo.
Varane ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Madrid, kuwaasoo raadinaya inay dhaqaale uruuriyaan madaama ay bartilmaameedsanayaan xiddiga PSG Kylian Mbappe iyo dareenka Borussia Dortmund Erling Haaland.
United ayaa lagu soo waramayaa inay u soo baxday dalabyo xoogan laakiin Chelsea ayaa la rumeysan yahay inay safka hore kaga jirto soo xerogelinta ciyaaryahanka reer France.
- Goal, Sport1 iyo wargeysyo kale ayaa sheegaya in Bayern Munich ay wadahadal la furtay RB Leipzig si ay u shaqaaleysiiso tababare Julian Nagelsmann. Iyadoo Hansi Flick uu tagayo dhamaadka xilli ciyaareedka, Nagelsmann ayaa laga doonayaa magaalada Munich.
- Jose Mourinho ayaa diyaar u ah inuu ku laabto Inter hadii uu baxo tababaraha Nerazzurri Antonio Conte, sida uu sheegayo Calciomercato. Conte wuxuu qarka u saaran yahay inuu Inter u horseedo kulankoodii ugu horreeyay ee Scudetto tan iyo 2009-10, markaas oo Mourinho uu kormeeray seddexleey, laakiin mustaqbalka tababarihii hore ee Talyaaniga ayaa ah mid aan la hubin. Mourinho ayaa diyaar ah ka dib markii laga ceyriyay Tottenham.
- Sida laga soo xigtay Gol Digital, Atletico Madrid ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo daafaca Chelsea Cesar Azpilicueta.
- Roma waxa ay bartilmaameed ka dhiganeysaa Maurizio Sarri tababarahooda xiga, ayuu yiri Corriere dello Sport. Paulo Fonseca ayaa haatan hogaaminaya kooxda laakiin waxa uu cadaadis ku saaran yahay caasimada Italy. Roma ayaa lagu soo waramayaa inay durbaba la kulantay kooxdiisii ​​hore ee Chelsea, Juventus iyo tababaraha Napoli Sarri si ay ugala hadlaan faahfaahin fiican.
- Milan ayaa muddo hal bil ah siisay xiddigeeda Gianluigi Donnarumma si uu go’aan uga gaadho heshiis kordhintiisa, sidaas waxaa qortay Tuttosport. Donnarumma ayaa qarka u saaran inuu noqdo wakiil xor ah dhamaadka xilli ciyaareedkaan, xiddiga heerka caalami ee dalka Talyaaniga ayaanan weli dib u saxiixin. Sida United, Chelsea, Juventus, PSG iyo Madrid ayaa lala xiriirinayay. Milan ayaa lagu soo waramayaa inay isha la raaceyso ciyaaryahanka Lille Mike Maignan si ay bedel ugu noqoto.
- Bild ayaa sheeganeysa in Arsenal ay saf ugu jirto saxiixa Dortmund Julian Brandt si ay bedel ugu noqoto amaahda Martin Odegaard, kaasoo xiiso ka helaya meelo kale. Brandt ayaa noqon kara mid ka mid ah ciyaartoy badan oo Dortmund ah oo ka tagaya xilli ciyaareedka soo socda iyadoo kooxaha ay ku wareegayaan Haaland, oo ay ku jiraan Manchester City, Liverpool, Barcelona, ​​United, Chelsea, PSG iyo Bayern.
Muqdisho: Taliye saldhig Boolis iyo ciidan la socday oo ku biiray Mucaaradka (Sawirro)